Nhau - T-shirts parizvino dzakakurumbira mafashoni zvinhu
T-shirts parizvino inozivikanwa fashoni zvinhu. Izvo zvakajairika, zvakapusa uye zvakachipa. Ivo vanotsvakwa neruzhinji. Saka mangani maT-shirts ari pamusika, uye kana shamwari dzikaungana nekudya, mavara anodonhera pahembe. Ungavachenesa sei?
1. Dzorera T-shati usati wageza, kuitira kuti mapatani akanaka asazokuvara panguva yekuwacha.
2. Geza nemaoko, zvinyoro nyoro, usashandise simba,
3. Usomise T-shirt yakanangana, tendeukira mukati kuti iome. Izvi zvinogona kudzivirira kuti hembe dzirege kusvibiswa, uye mbatya dzinozoita yero nekuomesa
4. T-shati ine tema yakasviba inogona kunyoroveswa mumvura ine munyu kwe1 ~ 2 maawa kana ichinge yashambidzwa kekutanga, izvo zvinogona kudzivirira zvipfeko kubva pakudonha
5.Gadzira chimiro cheT-shati kana uchiomesa, saka haufanire kuchipisa.
6. Usageze T-shirts nedzimwe nguvo dzakasviba, kuti urege kukonzeresa mbatya, kuyambuka ruvara,
7. Usapisa kupisa, uye tembiricha yemvura yekotoni T-shati haifanire kudarika madhigirii makumi matatu, kuti isakurumidze kukwegura uye kudonha kwekudhinda. Matipi ekuwachisa hembe dzemitambo yekuzorora 1. Yakanaka alkali uye kupisa kupisa.
Nzira yekugeza sei kutambanudza T-shirts?
Elastic T-shirts haifanire kuainwa pakakwirira tembiricha kudzivirira kukuvara kune kusimba kwejira; usakukurwa, izvo zvinokanganisa kusimba kwemucheka; mamwe maT-shiti emhando dzakarukwa nemucheka wepakati-wakarukwa, shinda yakapfava, uye jira repamusoro rakapamhama. Ngwarira kuti usapfuure paunenge uchigeza Zvinorema kudzivirira kupfuuridza zvakawandisa; elastic T-shirts haigone kuburitswa kuzuva kudzivirira kukanganisa kune kusimba kwejira.
Kazhinji kutaura, kana uchisuka maT-shirts, edza kuti usashambidze muchina, nekuti izvi zvinokanganisa kudhinda uye kusimba kwejira. Uye zvakare, zvakanakisa kuomesa iwo kudivi rekumusoro kudzivirira iwo akadhindwa mapatani kubva mukuburitsa.